तपाईको माक्स खोई ? भन्दै स्याङ्जा प्रहरी सडकमा तपाईको माक्स खोई ? भन्दै स्याङ्जा प्रहरी सडकमा
तपाईको माक्स खोई ? भन्दै स्याङ्जा प्रहरी सडकमा
स्याङ्जा—१३, बैशाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारमा तपाइको मास्क खोई ? भन्ने कार्यक्रम चलाएको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट शुरु गरिएको यो कार्यक्रम जिल्लाका विभिन्न ठाँउमा गरिने भएको हो । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दो रुपमा नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखिन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले सडकमा पुगेर यस्तो कार्यक्रम संचालन गरेको प्रहरी प्रमुख होविन्द्र वोेगटीले बताए । सिद्धार्थ राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधन, पैदल यात्रु र बजार क्षेत्रका सर्वसाधरणलाई तपाईको माक्स खोई ? भन्ने कार्यक्रम मार्फत सचेतना सहित केही माक्स वितरण गरेको वोगटीले बताए ।
स्याङ्जामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो रुपमा रहेकाले प्रहरी प्रमुखकै नेतृत्वमा सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सदरमुकामका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण सचेतना अभियान संचालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुचना अधिकारी राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । पैदल यात्रा गर्दा होस वा सवारी साधनमा यात्रा गर्दा होस अनिवार्य माक्स प्रयोग गर्न सर्वसाधरणलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । कोरोना संक्रमित हुनबाट बचौ, अरुलाई पनि बचाउ भन्ने नारा सहित प्रहरीले सर्वसाधरणलाई सचेत गराएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सिमा नाकामा रहेको स्याङ्जा पहिलो चरणमा पनि निकै जोखिम रहेको थियो ।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट पनि स्याङ्जा उच्च जोखिममा हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पहिलो चरण माक्स लगाउन र सेनिटाईजरको प्रयोग गर्न सचेत गराएको बताइएको छ । हाल सम्म स्याङ्जामा करिव ५० जना संक्रमित भइसकेका छन् भने एक जनाको निधन भइसकेको छ । स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउदै स्याङ्जावासीलाई सुरक्षित राख्न प्रहरी खेलेको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।